देउवाको पालो सकियो, अब नेतृत्व हामी लिन्छौँ : डा. शशांक कोइराला - www.biratsandesh.com
देउवाको पालो सकियो, अब नेतृत्व हामी लिन्छौँ : डा. शशांक कोइराला
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक द्धन्द्ध र विवाद समाधान गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय जिल्ला सभापतिहरुले सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध भेला नै गरे । विशेष महाधिवेशनको मागसमेत गर्न थालेपछि देउवा रुष्ट बनेका छन् । विशेष महाधिवेशनको कुरा किन उठ्यो ? देउवाको कमजोरी के हो ? कांग्रेसभित्रको विवादलगायतका विषयमा ऋषि धमलाले महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासँग कुराकानी गरेका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिनजको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् मा गरिएको कुराकानीको सानो अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७५, शनिबार १५:१९
‘पब्जी’ प्रतिबन्धको निर्णय खारेज गर्न माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट
पत्नी र बुहारीपछी प्रचण्ड आँफै अस्वस्थ
एभरेष्ट प्रिमियर लिगको उपाधि ललितपुर प्याट्रिएटसलाई
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य स्थगित (विज्ञप्तिसहित)
सम्झना दिवसको अवसरमा विराटनगरमा र्याली तथा दिप प्रज्वलन
साउन १ गतेदेखि विराटनगरमा नयाँ ट्राफिक नियम
‘अङ्गिकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता नदेउ’: सर्वोच्च अदालत
एकता संयोजन समितिको बैठक आज
संसदमा त राष्ट्रपतिज्यूको निजी सरकारको कार्यक्रम पो घोषणा रहेछ: गगन थापा
आज उधौली पर्व, मुख्यमन्त्री राईद्धारा शुभकामना व्यक्त
एसइई परीक्षा रद्द भएपछि सप्तरीमा विद्यार्थीद्वारा प्रदर्शन, बिहानैदेखि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
ओली र मोदीबीच भेटवार्ता (तस्बिर)